6 နှင့် 4GB RAM ပါသည့် Meizu M6S သည် TENAA မှရရှိသည် Androidsis
6 နှင့် 4GB RAM ပါသည့် Meizu M6S သည် TENAA မှအောင်လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်
ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် 6GB RAM ဖြင့် Meizu M3S ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၊ အာရှကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ catalog တွင် RAM စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အမျိုးအစား ၂ မျိုးကိုထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ယင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံမှထိန်းညှိသူနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသူ TENAA မှမော်ဒယ်နှစ်မျိုးအားပေးထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထုတ်လုပ်ထားသောဗားရှင်း၏တူညီသောနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမူ 4GB နှင့် 6GB RAM အသီးသီးရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို M712Q-B ဟုခေါ်သည်။
၎င်းသည် Meizu M6S ကိုစတင်ရောင်းချချိန် မှစ၍ ရရှိခဲ့သည့်ရောင်းအားအောင်မြင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။အလားအလာရှိသောဤမိုဘိုင်းကိုတိုးတက်စေရန်ကုမ္ပဏီ၏အလိုဆန္ဒအပြင်ထို့အပြင်ပရိုဆက်ဆာသို့မဟုတ်အခြားရှိပြီးသားအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းထက် ပို၍ ပင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
TENAA ပြောထားသည်အတိုင်း Meizu M6S ကိုဗားရှင်းအသစ်နှစ်မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်ခုမှာ 4GB RAM နှင့်နောက်တစ်ခုမှာ 6GB ဖြစ်သည် ကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင် microSD ကဒ်ဖြင့် 64GB Internal Memory ပါရှိသောမော်ဒယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ROM ပမာဏ 128GB ပိုများနိုင်သည်။ ၎င်းသည် 32GB နှင့် 64GB တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲမှုသည် 3GB RAM ၏မူလမူကွဲကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များအနေဖြင့်၊။ M6S အသစ်တွင်တူညီသော ၅.၇ လက်မ HD + 18:9ဖန်သားပြင်ကို resolution 5.7 x 1.440 pixels၊ အတူတူ Exynos 720 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူတူပင် ၃၀၀၀ mAh မဖြုတ်နိုင်သောဘက်ထရီနှင့် 7872W အမြန်အားသွင်းနိုင်မှု၊ နောက်ကင်မရာအတူတူဖြစ်သည်။ 3.000 megapixels နှင့်အတူတူပင် 18MP ရှေ့ဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ။ ဒါ့အပြင် ၎င်းတို့တွင် Meizu ၏ Flyme 6.2 OS စိတ်ကြိုက်အလွှာနှင့်အတူ Android Nougat operating system အတူတူပင်ရှိသည်.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် 6GB RAM Meizu M3S ကဲ့သို့ရွှေ၊ Matte Black, Silver နှင့် Blue တို့ကိုအရောင်တူရွေးချယ်မှုဖြင့်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS »6နှင့် 4GB RAM ပါသည့် Meizu M6S သည် TENAA မှအောင်လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်
Sony ၏ Xperia ဗီဒီယိုတွင်တိုးတက်မှု